सभामुखबाट बलात्कृत भए लगत्तै कसलाई गयो फोन ? - NepalKhoj
सभामुखबाट बलात्कृत भए लगत्तै कसलाई गयो फोन ?
नेपालखोज २०७६ असोज १४ गते १२:३८
१४ असोज २०७६, काठमाडौं । सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी संसदकी कर्मचारीले ‘घटना’ भएलगतै राति नै सांसदहरुलाई फोन गरेर सहयोग मागेको खुलासा भएको छ ।
घटना भए पश्चात राति ७ बजेतिर सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नो कोठामा आएको र यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडितको दाबी छ । उनले त्यही रात साढे ११ बजे नेपाली कांग्रेसकी सांसद् उमा रेग्मी अधिकारीलाई फोन गरेको पाइएको छ ।
रेग्मीका अनुसार पिडितले मलाई न्याय चाहियो माननीयज्यू भन्दै फोन गरेकी थिइन् । रेग्मी भन्छिन्, ‘त्यस पश्चात मैले के भयो र भनेर सोधेँ, उनले म रेपमा परेँ भनिन् । कोबाट भन्दा सभामुखबाट भनिन् ।’ उनको कुरा पत्याउनै गाह्रो भएको रेग्मीले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रमाण के छ त भन्दा उनले प्रतिवाद गर्दा मलाई कुटपिट पनि गरे, अरु केही प्रमाण छैन भनिन् ।’
त्यसपछि आफूले यदि बलात्कारको प्रयास नै भएको भए कानूनी उपचार खोज्न सुझाएको सांसद रेग्मीले सुनाइन् । सांसद रेग्मीका अनुसार पीडित महिला संसद सचिवालयकी कर्मचारी हुन् र संसदमा जाने क्रममा बेलाबेला देखभेट हुन्थ्यो ।
आइतबार विहान पनि पीडित महिलाले फोन गरेपछि आफूले पार्टीका नेताहरुलाई पनि घटनाबारे बताएको रेग्मीले बताइन् । तर, त्यसपछि कुनै सम्पर्क भएन । ‘अरु प्रमाण केही छैन । प्रमाण भनेको उनी मात्र हुन् । उनी अगाडि आइन् भने हामीले साथ दिन्छौं, नभए हामीले के गर्ने’, सांसद रेग्मीले भनिन् ।